Lectulandia को समापन: best उत्तम विकल्पहरू ग्याजेट समाचार
हाम्रो सबैभन्दा धेरै लोकप्रिय पढ्ने वेबसाइटहरू, जुन हाम्रो पुस्तकहरूको क्याटलगको पोषण गरिरहेका छन्, अफवाहहरूका अनुसार बन्द हुन सक्छ। यसले हामीलाई विकल्प खोज्न बाध्य पार्दछ यदि हामी नि: शुल्क PDF, Epub, र MOBI पुस्तकहरूको मजा लिन जारी राख्न चाहान्छौं। केहि यस्तै भयो जब इपब्लिब्रेले काम गर्न रोकिदिए, किनकि यो इपब पुस्तकहरूको सबैभन्दा लोकप्रिय वेब र इन्टरनेटमा पीडीएफको सबैभन्दा व्यापक क्याटलग र नियमित प्रयोगकर्ताहरूको ठूलो संख्याको एक थियो।
अब यस्तो देखिन्छ कि लेक्टुलान्डियामा पनि त्यस्तै हुनेछ, त्यसैले हामी भरपर्दो विकल्पहरू खोज्न बाध्य भएका छौं। यस लेखमा हामी ल्याक्टुलन्डिया आपूर्ति गर्न alternative विकल्पहरू दिन लाग्दछौं बन्द हुने वा स्थायी पतनको मामलामा र यसैले इन्टरनेटमा नि: शुल्क पुस्तकहरूको सम्पूर्ण सूचीको आनन्द लिन जारी राख्नुहोस्।
अमेजन किन्डल नि: शुल्क को लागी असीमित प्रयास गर्नुहोस् days० दिन को लागी र अधिक पहुँच १ लाख पुस्तकहरु कुनै पनि उपकरणमा।
1 के Lectulandia बन्द छ?
2 24 प्रतीकहरू
के Lectulandia बन्द छ?
ठीक छ, सबैले संकेत गर्दछ र जब नदीको आवाज सुनिन्छ ... यो वेबसाइटले धेरै प्रयोगकर्ताहरूलाई सबै ढाँचामा ठूलो संख्यामा पुस्तकहरूको साथ भोजन खुवाइरहेको छ। तर हामी यसको कानूनी समस्याहरूको कारण यसको सम्भावित बन्द हुने वा स्थायी पतनको बारेमा महिनौंदेखि अफवाहहरू पढ्दैछौं। यसमा अस्थायी बूँदहरू भइरहेको छ, केहि मिल्दोजुल्दो केहि समान भयो जुन केहि अन्य वेबसाइटहरूमा समान सामग्री प्रस्ताव गर्दछ।
अहिले म यो लेख लेख्ने मिति अनुसार, यसको मूल डोमेनमा वेब तल छ तर यदि हामी जान्छौं www.lectulandia.me यदि हामी यसलाई पहुँच गर्न सक्दछौं। यी डोमेन परिवर्तनहरूको साथ, प्रक्रिया उदाहरणका लागि पाइरेटबेमा हुने जस्तो अलि बढाउन सकिन्छ। यदि हामी समयमै फर्कियौं र हामी २०१ to मा फर्क्यौं भन्ने खबर आएको थियो कि एक न्यायाधीशले पाइरेटेड सामग्री सहित धेरै पृष्ठहरू बन्द गर्ने आदेश दिए र ती मध्ये लेक्टुलान्डिया हो, त्यसैले डोमेन परिवर्तन अक्सर बारम्बार हुन सक्छ।
अहिलेको लागि हामी .me डोमेनबाट लेक्टुलान्डिया प्रयोग गर्न जारी राख्न सक्छौं तर सतावट रोकिने छैन किनकि कानून यसमा स्पष्ट छ। धेरै प्रयोगकर्ता विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछन् र यस लेखमा हामी ती मध्ये केही विवरणहरूमा जान्छौं।
उत्तम विकल्प निस्सन्देह २ Sy प्रतीक हो जुन हामी धेरै सामग्रीहरू निःशुल्क र सुरक्षित रूपमा डाउनलोड गर्न सक्छौं यद्यपि यसले विभिन्न प्रकारका ढाँचाहरूको आनन्द लिदैन, त्यसैले। यी पुस्तकहरूको बहुमत PDF ढाँचामा हुनेछयद्यपि यो ढाँचा लगभग कुनै पनि उपकरणद्वारा पढ्नयोग्य छ। थप रूपमा, यो वेबसाइटले हाम्रो मोबाइलबाट पुस्तकहरू र अडियोबुकहरू डाउनलोड गर्न पनि आफ्नै आवेदन प्रदान गर्दछ।
यदि हामी यसको क्याटलग अनुसन्धान गर्छौं भने, हामी पीडीएफमा आधा मिलियन भन्दा बढी पुस्तकहरू फेला पार्छौं, तर तिनीहरूलाई डाउनलोड गर्न हामीले दर्ता अन्तर्गत एउटा खाता खोल्नु पर्छ वा हाम्रो फेसबुक खाता प्रयोग गर्नुपर्नेछ। डाउनलोडको नि: शुल्क प्रयोगको लागि हामीले प्रचार गर्नुपर्नेछ, यद्यपि यो सामान्य हो किनकि वेबको मर्मतभार सित्तैमा छैन। यदि हामी विज्ञापनलाई बेवास्ता गर्न चाहन्छौं भने हामी प्रत्येक महिना 8,99 XNUMX। को लागि एक प्रीमियम सदस्यता पहुँच गर्न सक्दछौं दैनिक डाउनलोडको सीमा बिना यसको सम्पूर्ण क्याटलग पहुँच गर्नका साथै।
अर्को पर्याप्त लोकप्रिय वेबसाइट जहाँ हामी डाउनलोडका लागि 65.000 XNUMX,००० भन्दा बढी पुस्तकहरूको सूची प्राप्त गर्न सक्दछौं। हामी सबै काल्पनिक विधाहरूको शीर्षक फेला पार्दछौं, जुनमा राष्ट्रिय फसलका निस्सन्देह बाहिर उभिन्छन्। पुस्तकहरू इपब, पीडीएफ र मोबी ढाँचामा डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
एक सहज खोज ईन्जिनलाई धन्यबाद, हामी आफूले खोज्न चाहेको किताबको शीर्षक प्रविष्ट गरेर र डाउनलोड बटन क्लिक गरेर हामी आफूले खोजेको सबै कुरा भेट्टाउनेछौं। जे होस् यसले हामीलाई डाउनलोड डाउनलोड सक्रिय गर्न पृष्ठमा दर्ता गर्न आवश्यक पर्दछ।
तेस्रो स्थितिमा हामी फ्रेडिटोरियल पाउँछौं, एक वेबसाइट जसले हामीलाई PDF ढाँचामा पुस्तकहरूको विस्तृत क्याटलग प्रदान गर्दछ र यद्यपि यसको क्याटलगको आकार २ उल्लेखित वेबसाइटहरू भन्दा सानो छ पहिले, गुण उत्कृष्ट छ र हामीले कहिँ पनि विज्ञापनको कुनै संकेत भेट्टाएनौं। यस वेबसाइटले हामीलाई पहिले दर्ता गर्न आवश्यक छैन र यो पूर्ण रूपमा नि: शुल्क छ।
वेबसाइट यसको सफा, सहज ज्ञान युक्त इन्टरफेसको लागि खडा छ, धेरै न्यूनतम डिजाइनको साथ जसले यसको मेनूहरू नेविगेट गर्न सजिलो बनाउँदछ। यसको सहज ज्ञान ईन्जिनको लागि धन्यवाद कुनै शीर्षक फेला पार्न धेरै सजिलो हुनेछ जुन हामी यसको शीर्षक र यसको लेखक मार्फत दुबै खोज्दैछौं। स्पेनिशमा विस्तृत क्याटलगको साथसाथै हामी अंग्रेजीमा धेरै किताबहरू पनि भेट्टाउन सक्छौं।
यस पटक हामीसँग एक अधिक नम्र वेबसाइट छ, जुन यद्यपि यो शीर्षकको एक ठूलो सूची उपलब्ध छ, सायद माथिका उल्लेख संग शायद आयो। यस अवस्थामा हामी लगभग १०,००० पूर्ण कानूनी शीर्षकहरू PDF ढाँचामा फेला पार्दछौं। शीर्षकहरू हाम्रो कम्प्युटरमा र हाम्रो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ कुनै पनि पीडीएफ रिडरको साथ हेर्नका लागि।
प्लानेटलिब्रोमा हामी सकेसम्म धेरै शीर्षकहरू डाउनलोड गर्न सक्दछौं जुन हामी चाहानुहुन्छ कुनै प्रतिबन्ध वा दर्ता गर्न आवश्यक बिना। एउटा फाइदा जसको लागि यो बाहिर खडा हुन्छ त्यो यो हो कि यसले वेबबाट सीधा पुस्तकहरू पढ्न मद्दत गर्दछ, अघिल्लो डाउनलोडको आवश्यकता बिना नै। यसको क्याटलग, सूचीमा अन्य वेबसाइटहरू भन्दा सानोको बावजुद, सबै काल्पनिक विधाहरूको शीर्षकहरू छन्।
अन्तमा, हामी पाठ वेबसाईटहरू मध्ये कुन चाहिन्छ सब भन्दा बढी सिद्धान्तमा पुस्तकहरूको खोजीमा विद्यार्थी वा पेशेवरहरूले प्रयोग गर्ने कुरा उल्लेख गर्दछौं। यस वेबसाइटमा हामी सबै प्रकारका पुस्तकहरू भेट्टाउँछौं जुन विशेष व्यवसायहरूको लागि कुनै पनि प्रकारको प्राविधिकता कागजात गर्दछ। पुस्तकहरू पूर्ण स्पेनिशमा छन् र पूर्ण रूपमा नि: शुल्क छन् र हामीलाई वेबबाट सीधा डाउनलोड गर्नको लागि पहिले दर्ता आवश्यक पर्दैन।
यस वेबसाइटमा हामी १०० भन्दा बढी पूर्ण रूपमा नि: शुल्क पुस्तकहरू पीडीएफ ढाँचामा पाउँछौं, जुन विभिन्न क्षेत्रहरूमा वित्त, अर्थशास्त्र वा प्रोग्रामि programmingबाट व्यक्तिगत विकासको लागि व्यवस्थित गरिएको छ। यसले हामीलाई यसको सहज ज्ञान ईन्जिनको माध्यमबाट एक सरल र छिटो डाउनलोड गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ जुन हामी छिटो खोज्दैछौं भन्ने कुरा भेट्टाउन मद्दत पुर्‍याउँछ, हामी लेखक, प्रकाशक वा शीर्षकबाट पुस्तक खोज्न सक्छौं।
यी alternative विकल्पहरू छन् जुन हामी तपाईंलाई ActualidadGadget बाट प्रस्ताव गर्दछौं, तर हामी तपाईंको प्रस्तावहरूको लागि खुला छौं, त्यसैले टिप्पणीमा तपाईंको विचार छोड्न नहिचकिचाउनुहोस्। हामी तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न पाउँदा खुसी हुनेछौं र ती हाम्रा पाठकहरूको लागि ठूलो सहयोगी हुनेछन्। यस प्रकारले, लेक्टुलान्डियाको पूर्ण बन्द भएमा, हामी राम्रोसँग भण्डार हुनेछौं र हामी यसको ठूलो अनुपस्थिति देख्नेछैनौं, किनकि यो वेबसाईटलाई पाठकहरूले मनपराउँदछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » Lectulandia को समापन: best उत्तम विकल्पहरू
हामीले औकीको नयाँ वायरलेस इन-ईयर हेडफोनको परीक्षण गर्‍यौं [REVIEW]